Tag Archive for "अस्ट्रेलिया" - विश्वकप क्रिकेट : उपाधि दाबेदार अष्ट्रेलिया र बंगलादेशबीच प्रतिस्पर्धा हुँदै
विश्वकप क्रिकेट : उपाधि दाबेदार अष्ट्रेलिया र बंगलादेशबीच प्रतिस्पर्धा हुँदै
एजेन्सी । इंग्ल्याण्डमा जारी १२ औं संस्करणको आईसीसी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटमा अहिले उपाधि दाबेदार अष्ट्रेलिया र बंगलादेशबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । इंग्ल्याण्डको नटिङघममा अष्ट्रेलियाले टस जितेको छ र पहिले ब्याटिङ गर्ने निर्णय गरेको छ । अष्ट्रेलियाले टस जितेपछि बंगलादेशले सुरुवातमा बलिङ गर्ने भएको छ । ट्रेण्ड ब्रिजमा आज दुवै टिम जित निकाल्ने लक्ष्यसहित मैदान उत्रिएका छन् । दुवै टोली जित निकाल्दै श... थप पढ्नुहोस्
विश्वकप क्रिकेट : अस्ट्रेलियासँग स्तब्ध वेस्ट इन्डिज !
एजेन्सी । बेलायतमा जारी एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेट अन्तर्गत बिहीबार राति सकिएको खेलमा अस्ट्रेलिया विजयी भएको छ । ट्रेन्ट ब्रिजमा भएको खेलमा अस्ट्रेलियाले वेस्ट इन्डिजलाई १५ रनले पराजित गरेको हो । २८९ रनको लक्ष्य पछ्याएको वेस्ट इन्डिजले ९ विकेटको क्षतिमा २७३ रन बनाउन सक्यो । उसका लागि साई होपले ६८ तथा निकोलस पूरनले ४० रन बनाए । यस्तै ज्यासन होल्डरले ५१ रनको योगदान दिए पनि जितका लागि पर्याप्त भएन ।... थप पढ्नुहोस्
अस्ट्रेलियाको डर्विनमा अन्धाधुन्ध गोली चल्दा ४ जनाको मृत्यु
एजेन्सी । अस्ट्रेलियाको डर्विनका विभिन्न पाँच स्थानमा एक बन्दुकधारीले गोली चलाउँदा चारजनाको ज्यान गएको छ ।घटनामा एकजना घाइते भएको स्थानीय अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । स्थानीय समय अनुसार मंगलबार बेलुका ६ बजेतिर पहिलो घटना भएको हो । त्यसको एक घण्टा भित्र घटनामा संलग्न भएको आरोपमा ४५ वर्षका एक व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्रेको छ । ती व्यक्ति एक्लैले पाँचै स्थानमा ग... थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । सानिमा बैंक र दक्षिण कोरियाको भि.पि. आईएनसीबीच रेमिटयान्स सेवा सम्झौता भई संचालनमा आएको छ । यस सम्झौतापत्रमा सानिमा बैंकको तर्फबाट प्रमुख वित्तिय अधिकृत सरोज गुरागाई र भि.पि. आईएनसिको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जुनकिमले हस्ताक्षर गरेका छन् । यस सम्झौता अन्तर्गत सानिमा बैंकको रेमिटयान्स सेवा सानिमा एक्सप्रेस मार्फत दक्षिण कोरियाबाट पठाएको रकम नेपालभरि १०हजार भन्दा बढि आधिकारिक प्रत... थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । नेपाल सरकारलाई सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई अगाडि बढाउँदा पीडितको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राख्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लगायत नेपालमा कार्यरत विभिन्न पश्चिमा कूटनीतिक नियोगले आग्रह गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नेपाल कार्यालयको अगुवाइमा युरोपेली युनियन, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य बेलायत, अस्ट्रेलिया, जर्मनी, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, नर्वे र स्वीजरल्यान्डका दूतावासले बिहीबार संयुक्त विज... थप पढ्नुहोस्
चिनीमा दिइएको अनुदानप्रति अस्ट्रेलियाको आपत्ति
सिड्नी । अस्ट्रेलियाले चिनीमा भारतले दिइआएको अनुदानका विरुद्धमा विश्व व्यापार सङ्गठन 'डब्लुटिओ' मा उजूरी दिने शुक्रबार घोषणा गरेको छ । विश्वमै चिनीको मूल्यमा अस्थिरता आएको र स्वदेशी चिनी उत्पादकहरुलाई हानि पु¥याएको अस्ट्रेलियाको भनाइ छ । विश्वमै भारत दोस्रो सबैभन्दा बढी चिनी उत्पादन गर्ने राष्ट्र हो । भारतले आफ्ना उखु कृषकहरुलाई अनुदान दिने गरेको छ । गत वर्ष भारतमा सबैभन्दा धेरै उखु उत्पादन भ... थप पढ्नुहोस्